ခေတ်စားနေတဲ့ Undercut ရဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုး – The Myanmar Gentlemen Supplies
ခေတ်စားနေတဲ့ Undercut ရဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုး
ကျွန်တော်တို့ ဒီတစ်ခါတော့ Undercut လို့ခေါ်တဲ့ Hair Style တွေအကြောင်းကိုပြောပါ့မယ်။ သူလည်း ဟိုးအရင်ကတည်းက ခေတ်အဆက်ဆက် ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Hair Style ထဲမှာပါပါတယ်ဗျ။ ပထမကမ္ဘာစစ် တဝိုက်လောက်မှာ စခေတ်စားခဲ့ပြီး သန့်တဲ့ပုံ၊ ဂေါ်တဲ့ပုံ စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုး သွားနိုင်တဲ့အတွက် အခုဆို တကြော့ပြန်ခေတ်ထနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ကဆံပင်ကိုလည်း Side Part, Slicked Back, Quiff, Pompadour အစရှိတဲ့ ပုံစံများအားလုံးသွားနိုင်တဲ့အတွက် Versatile ဖြစ်လို့ လည်း လူကြိုက်များနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ 🔥🔥
Undercut ဆိုတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ အောက်ကိုညှပ်ထားတာပေါ့နော် (အတော်ရှင်းသွားတာပဲ 😝)။ အရှေ့နဲ့ အပေါ်နဲ့ကို အရှည်ထားပြီး၊ အောက်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ ဘေးနဲ့အနောက်က သိသိသာသာ တိုနေတာကို Undercut လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Undercut အမျိုးအစား ၃ မျိုးအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ပြောပြသွားပါ့မယ်။ 🤗
Different Types of Undercut
အဲ့ဒီ ၃ မျိုးကတော့ - 1.Connected/Blending Undercut, 2.Disconnected Undercut, 3.Fade Cut တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Disconnected နဲ့ Fade Cut က အထာကျကျ အမျိုးအစားတွေပါ။ Connected ကတော့ Classic ဆန်ဆန်အငြိမ်ပေါ့ဗျာ။ ခေတ်ဆန်ဆန် ကိုယ့်လူတို့အတွက်ကတော့ Disconnected Undercut နဲ့ Fade Cut တွေက Bold ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ သန့်သန့်ပြံ့ပြံ့ရှိစေပြီး၊ Gentleman နဲ့ လူကြီးမင်းတို့အတွက်ကတော့ Connected or Blending Undercut က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ Smart ကျစေပါတယ်။ 💯
ဒီသုံးမျိုးက ဘာတွေကွာလဲ မေးရင် ဘေးဆံပင်မှာ တကယ်တမ်းသိသိသာသာကွာတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ညှပ်ဆရာတစ်ချို့က ဒါကိုသိပ်သတိမထားမိတတ်ကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ညှပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံကို ဓာတ်ပုံရှာ၊ ဖုန်းထဲမှာ သေချာ Save သွားရုံတင်မကပဲ လိုချင်တဲ့ Undercut Features ကိုပါ သေချာပြောပြပြီး ညှပ်တာကပိုကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့လိုက်မဲ့ ဆံပင်အကြောင်း ကိုယ်ပဲအသိဆုံးကိုး။ (ဖြစ်နိုင်ရင်လဲ ဒီ Blog ကိုပါ ဖတ်ခိုင်းလိုက်ပေါ့ဗျာ 😝)။ စိတ်ကြိုက်ဆံပင်ပုံစံရဖို့ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို သိထားရုံနဲ့မရသေးပါဘူး၊ ဆံပင်ညှပ်ဆရာရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်ပါတယ်။
ကဲဗျာ...ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Connected Undercut ကိုအရင်စပြောရအောင်
1. Connected/Blending Undercut
Connected/Blending Undercut (Photos: Google)
Undercut အမျိုးအစားထဲကတစ်ခုဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီဆံပင်ပုံစံကတော့ ဘေးပါးပြီး အပေါ်ရှည်ပဲပေါ့။Connected/Blending Undercut ဖြစ်ဖို့အဓိကအချက်ကတော့ ဘေးနဲ့အပေါ်နဲ့ကို ညှိပြီးညှပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးနဲ့ အပေါ်နဲ့ဆက်သွားတဲ့နေရာမှာ အရမ်းကြီး သိသိသာသာ ကွာအောင် ပါးထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ ဘေးတွေသိမ်းလို့ရအောင်နဲ့ တဆက်ထဲဖြစ်ပြီး ရောသွားအောင် ဘေးနဲ့ အပေါ်အရှည်ကို ညှိ(Blend) ပေးထားတာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ပုံထဲက Justin Timberlake လိုမျိုး Side Part ဘေးခွဲနဲ့ အငြိမ် ဒီဇိုင်းဖမ်းဖို့အတွက်သင့်လျောပါတယ်။ Quiff (အထောင်ဖွ) ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လည်း အေးအေးဆေးဆေးသွားနိုင်ပါတယ်။
2. Disconnected Undercut
Disconnected Undercut (Photos: Google)
Disconnected Undercut ကတော့ ပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်း အပေါ်က ဆံပင်အရှည်နဲ့ ဘေးက ပါးထားတဲ့ အရှည်က ညှိထားခြင်းမရှိပဲ အရမ်းကွာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးနှစ်ဖက်လုံးကို Guard Size 1/2/3 တွေနဲ့ ပါးထားပြီး၊ အပေါ်မှာ ရုတ်တရက်ကြီး ရှည်သွားတာမျိုးပါ။ ပါးရာကနေ ထူလာတာမျိူးမဟုတ်ပါဘူး။ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်နဲ့ ဂေါ်နိုင်မဲ့ ဒီဇိုင်းအနေအထားပဲပေါ့။ Pee Mak ထိုင်းရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသားတွေရဲ့ ကေ ဆိုပြီးလည်း ခေတ်စားခဲ့တာမကြာသေးပါဘူး။ အလယ်ကဆံပင်ကိုတော့ Side Part, Slicked Back, Quiff, Pompadour အစရှိတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
3. Fade Cut
Fade Cuts (Photos: Google)
Fade Cut တွေက ပြောရရင်တော့ Disconnected ရဲ့ အခွဲတမျိုးပဲပေါ့။ ဘေးဘက်တွေကို အောက်ဆုံးမှာ အပါးဆုံးထားရာကနေ အပေါ်ကို တဖြည်းဖြည်းထူလာပြီး၊ နာမည်အတိုင်း Fade in ဖြစ်၊ အရိပ်ကျသလိုမျိုး ဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ အဲ့ဒီ Fade in, အရိပ်ကျသလိုဝင်သွားတဲ့ ပုံစံကပဲ သူများနဲ့မတူ အထာကျတဲ့ ဒီဇိုင်းပေးသွားပါတယ်။ Fade Cut တွေက ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း ဘေးဆံပင်သိမ်းဖို့ အထိတော့မရှည်ပါဘူး။
Fade Cut မှာလည်း ဘေးဆံပင် အရိပ် (Fade in) ဖြစ်တဲ့ နေရာအလိုက် High Fade, Mid Fade, နဲ့ Low Fade ဆိုပြီး (၃) မျိုးလောက် ပြန်ခွဲပါတယ်ဗျ။ မျက်လုံးထဲမှာ ဘေးဆံပင်ကိုမြင်ကြည့်လိုက်ဗျာ။ အဲ့ဘက်မှာ အရိပ်ဝင်တာကို နားရွက်အပေါ်လောက်နဲ့ နားထင်အောက်ကနေ စထားရင် Low Fade, နားထင်လောက်ဆို Mid Fade နဲ့ နားထင်အပေါ်ကိုကျော်လာရင်တော့ High Fade ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Low Fade ကတော့ အငြိမ်ဆုံးဖြစ်ပြီး High Fade ဘက်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ ဂေါ်တဲ့အပိုင်းရောက်လာတာပေါ့ဗျာ။
Types of Fade Cuts (Photos: Google)
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ခေတ်စားနေတဲ့ Undercut ပုံစံကို သေချာသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗျ။ ဆရာသမားတို့ အငြိမ်ပဲသွားမလား အထာကျကျပဲ ဂေါ်ချင်သလား ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ ဒီ Blog လေးကိုပြပြီး လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုညှပ်နိုင်ကျပါပြီ။
ကေခုတ်ပြီးသွားတဲ့ သင့်ဆံပင်ကို နေ့တိုင်းအထာကျကျဖြီးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့
🎩The Myanmar Gentlemen Supplies🎩
မှာ အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီနဲ့ စပ်ဆက်ပစ္စည်းများကို စတင်မှာယူနိုင်ပါပြီ။
☎️Hotline: 09789 20 6464
📱Facebook Messenger: www.m.me/mmgents
🚚Home Delivery (YGN, MDY | 2-5 days)
💰Cash on Delivery (YGN | MDY) တို့ဖြင့်လဲဝန်ဆောင်မှုများရှိပါတယ်။
နယ်မြို့များကိုလဲ ငွေကြိုလွှဲပြီး ကားဂိတ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
#mmgents နှင့်အတူ ပုံမှန်များထဲမှ ဖောက်ထွက်လိုက်ပါ။
သငျ့အတှကျကိုကျညီမဲ့ ခေါငျးလိမျးဆီကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြနညျး
ခေါငျးလိမျးဆီလိမျးနညျး (The Ultimate Guide)
All Time Classic Soccer Player Hairstyles | presented by The Inside Forward
အမျိုးသားတို့ရှိထားသင့်တဲ့ Personal Grooming Tools များ
Copyright © 2022, The Myanmar Gentlemen Supplies.